बत्तीका पुतली- विविधा - कान्तिपुर समाचार
घुमुवा किराबाट बच्न मधुरो बत्ती बाल्ने, झ्यालढोकामा जाली लगाउने, जाली भए घरभित्रका मात्र र नभए बाहिरका मात्र बत्ती बाल्नुपर्छ ।
भाद्र ६, २०७५ रामचन्द्र अधिकारी
काठमाडौँ — बत्तीका पुतली । यो एउटा नेपाली लोकोक्ति हो । यसले कुनै चिजमा आकर्षित भई फँस्नु वा त्यसमा फँसेर ज्यान गुमाउनु भन्ने बुझाउँछ । के साँच्चै बत्तीमा आएका पुतली फँसेकै हुन् त ? बत्तीमा किन पुतली या अन्य किरा आएका होलान् !
गर्मी होस् वा जाडो मौसम, साँझ र राति बालिएका बिजुलीका बत्ती, टुकी र आगोमा किरा झुम्मिन्छन् । किरा यसरी बत्तीमा किन आउँछन् भनेर वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यसको पहिलो कारण हो– राति उड्ने किराले चन्द्रमा वा ताराको प्रकाशका आधारमा आफ्नो गन्तव्य पत्ता लगाउँछन् । तिनीहरू तारा वा चन्द्रमासँग निश्चित कोण मिलाएर उडिरहेका हुन्छन् । हामीले बालेको बिजुली बत्तीले तिनीहरूको उडाइको कोणलाई बाधा गरिदिन्छ अनि त्यही बत्तीमा अल्मलिन पुग्छन् । बाटो हराएको मानिसजस्तो तिनीहरू बत्तीमा गोलाकार कक्षमा घुमिरहेका हुन्छन् ।
दोस्रो कारण हो, झुक्किनु । भाले किरा झुक्किएर बत्तीमा झुम्मिन आइपुगेका हुन्छन् । भालेलाई आकर्षण गर्ने पोथीको जीउबाट एक प्रकारको रसायन निस्किने गर्छ । त्यसलाई फेरोमोन वा सेक्स हर्मोन भनिन्छ । फेरोमोनले इन्फ्रारेड किरण उत्पादन गर्छ । त्यो देखेर पोथीतिर भाले हान्निएर आउने हुन् । यस्तै किसिमको इन्फ्रारेड किरण बलिरहेको आगो वा टुकीले पनि निकाल्छ । भालेहरू पोथी भन्ठानेर आगोमा हामफाल्छन् । कहिलेकाहीं कारणवश झुक्किएर वा साँच्चै आकर्षित भएर पोथी किरा बत्तीमा आइपुग्यो भने सयौं भाले त्यही पोथीलाई पछ्याउँदै आइपुग्छन् ।
बत्तीमा आउने किरा सबै पखेटा भएकाहरू हुन्छन् । अधिकांश बसाइँ–सराइ गर्ने आनिबानीका हुन्छन् । बसाइँ–सराइकै क्रममा मानिसले बालेका बत्तीले अलमल्याइदिन्छ । तर कुनै रैथाने वा बसाइँ नसरी एकै बासस्थानमा बसिरहनेहरू पनि बत्तीमा झुम्मिने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । किनभने कतिपय किराको स्वभाव उज्यालोमा आकर्षित हुने हुन्छ । तसर्थ बत्तीमा आउने किरा एकै किसिमका नहुन सक्छन् ।
बत्तीले कुनै–कुनै फूलले जस्तै अल्ट्राभ्वाइलेट किरण उत्पादन र प्रसारण गर्छ । त्यसैले फूल सोचेर केही किरा बत्तीमा जम्न पुग्छन् र त्यही हराउँछन् ।
साह्रै मसिना किराले समेत राति उड्नलाई चन्द्रमा र ताराको उज्यालोलाई आधार मान्छन् । ७० प्रतिशत किरा यस प्रकृतिका हुन्छन् । चन्द्रमाको उज्यालोलाई नखिच्नेगरी बत्ती बल्यो भने किरा चन्द्रमाकै उज्यालोको कोणमा उडिजान्छन् । पूर्णिमाका केही दिन अघि र पछि यस्ता किराको उपस्थिति र प्रकोप कम देखिन्छ ।
जीव जगतमा आथ्र्रोपोडा वर्गको इन्सेक्टा कक्षामा पर्ने इन्सेक्ट्सलाई हामीले किरा भन्ने गर्छौं । यिनको संख्या र मात्रा साह्रै धेरै छ । किरालाई जीव जगतमा सबैभन्दा सफल मानिएको छ । धरतीमा भएका प्राणीमध्ये सबैभन्दा धेरै सुख्खा तौल (बायोमास) इन्सेक्ट्सकै छ । प्रजाति संख्या र जनसंख्या सबैभन्दा बढी यिनीहरूकै छ । एरिजोना विश्वविद्यालयको ‘क्वाटर्ली रिभ्यु अफ बायोलोजी–सेप्टेम्बर २०१७’ का अनुसार संसारमा सजीवको प्रजाति संख्या दुई अर्ब छ । त्यही जर्नल अनुसार चार करोड प्रजातिका किरा पृथ्वीमा छन् । अर्को नमुना छनोटले संसारमा किराको संख्या एक करोड खर्ब भएको अनुमान लगाएको छ ।
कतिपय किरा एक्ले हुन्छन् भने धेरैजसो सामाजिक वा समूहगत रूपमा बसेका हुन्छन् । माहुरी, अरिंगाल, बारुला, कमिला, धमिरा आदि समूहमा बस्छन् । एउटै गुँड (घार) मा हजारौं हुन्छन् । कमिलाको एउटै गोलोमा औसतमा ६ लाख ३० हजारवटा हुन्छन् । धमिराको त झन् ठूलो परिवार हुन्छ । धमिराको एउटा गोलोमा ३० लाख सदस्य पाइएको छ ।
किराहरू हावापानी र परिवर्तित वातावरण अनुसार समायोजन भई आएकाले सफल मानिएका हुन् । उनीहरूको प्रजनन दर उच्च हुन्छ । जस्तो– अफ्रिकन धमिराकी रानीले एक दिनमा ४३ हजारवटा फुल पार्छे । धमिरा रात्रियात्री हो । छिचिमिराको रूपमा हिउँदे वर्षा भएका बेला राति बत्तीमा आउने गर्छ ।
बत्तीमा आएका किराले आँगनदेखि ओछ्यानसम्म पुगेर मानिसलाई दु:ख दिइरहेका हुन्छन् । यस्ता किरा मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिन्छन् । बत्तीमा जीउभरि धुलैधुलो भएको मोथ पनि झुम्मिएर आउँछ । यसको धुलो जीउमा परे चिलचिलाउँछ । आँखामा धेरै परे आँखा बिग्रिने डर हुन्छ । जीउमा हानिकारक रसायन भएका किरा अरु पनि छन् । तिनले मानिसलाई चिलाउने र एलर्जी गराउने गर्छन् । यस्ता किरासँगको सम्पर्कले छालामा आएका विमिरा र एलर्जीका टाटामा संक्रमण हुनगए थप जटिल समस्या आउँछन् । ज्ञानेन्द्रीय, जनेन्द्रीय र अन्य कोमल भाग किरामा भएको रसायन र झुसको सिकार बढी हुने गर्छन् । बालबालिकालाई झन् बढी प्रभाव पर्छ ।
यस्ता घुमुवा किराबाट बच्न मधुरो बत्ती बाल्ने, झ्यालढोकामा जाली लगाउने, जाली भए घरभित्रका मात्र र नभए बाहिरका मात्र बत्ती बाल्ने गर्नुपर्छ । बत्तीमा स्याउला झुन्डाइदियो भने किरा कम झुम्मिन्छन् ।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:१८
भाद्र ६, २०७५ मीना मरासिनी
काठमाडौँ — झापाको अर्जुनधारामा ९ वर्षकी एक बालिकालाई ७० वर्षका वृद्धले बलात्कार गरे । नवलपरासीको प्रतापपुरमा साढे तीन वर्षकी बालिकालाई एक किशोरले बलात्कार गरे ।
कैलालीको लम्कीचुहामा १३ वर्षकी बालिका बलात्कृत भइन् । काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा १४ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भयो ।
पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा आएका केही दर्दनाक समाचार हुन् यी । छोरीहरू धर्तीमा पाइला टेक्ने बित्तिकैबाट कसरी असुरक्षाको दलदलमा फँस्दारहेछन् भन्ने तथ्यलाई यी घटनाले उजागर गरेका छन् । आमाको काखमा खेल्ने दुधे बालिकासमेत बलात्कारमा पर्नथालेको घटनाले समाज किन यति धेरै विकृत, हिंसक, बर्बर, अमानवीय तथा यौनपिपासु बनिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ सय ४४ महिला बलात्कृत भए । अघिल्लो वर्ष ०७३/७४ मा ११ सय ३१ तथा ०७२/७३ मा १०८९ जना महिला बलात्कारमा परे । यस अनुसार हरेक वर्ष बलात्कारका घटनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भैरहेको देखिन्छ । हरेक दिन औसत तीनवटा बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् भने थप दुई जनामाथि बलात्कार प्रयास हुन्छ । बलात्कृत हुनेमा सबैभन्दा बढी १० देखि १६ वर्ष उमेरका बालिका छन् । त्यसपछि १० वर्ष मुनिका बालिका छन् । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला ४ वर्षमा १० वर्षमुनिका ८ सय २० बालिका बलात्कारमा परेका छन् ।
यी सार्वजनिक भई उजुरी तथा मुद्दा दर्ता भएका बलात्कारका घटना हुन् । त्यस बाहेक घर–समाजको डर, धाकधम्की, ज्यानकै जोखिम हुने, बेइज्जतीको डर आदिका कारण धेरै पीडित महिला, किशोरी तथा बालिकाले आफूमाथिको अत्याचार सार्वजनिक गर्नसकेका छैनन् । लालन–पालन तथा शिक्षादीक्षा दिने बहानामा घरमा राखेर ललाइ–फकाइ तथा धम्काएर गरिने बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटना भित्रभित्रै भइरहेका हुन सक्छन् ।
गरिबी तथा बाध्यताले यस्ता अत्याचारमा पीडित बोल्न सक्दैनन् । घटना सार्वजनिक गरे वा विद्रोह गरे आफूलाई घरबाट निकालिने, अलपत्र तथा असहाय बनाइने र समाज तथा घरपरिवारले पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्ने डर उनीहरूमा हुन्छ । कथित संरक्षकत्वको भेषमा हुने यस्ता अत्याचारबाट खासगरी बालिका तथा किशोरी प्रताडित बनिरहेका हुन्छन् ।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग सहितको पेटीकोट आन्दोलनले सोसल मिडिया तथा सञ्चार माध्यममा समेत ठाउँ पायो । तर हालै लागू भएको नयाँ ‘मुलुकी संहिता ऐन’बारे पर्याप्त चर्चा भैरहेको छैन । संविधानले मृत्युदण्डको परिकल्पना गरेकै छैन । यस अघिको कानुन केवल दण्डमुखी भएकाले पीडकलाई दिइने सजाय प्राथमिकतामा पथ्र्याे । पीडितको संरक्षण तथा क्षतिपूर्तिको विषय महत्त्वमा पर्दैनथ्यो ।
नयाँ कानुन पीडितमुखी मात्र होइन, बलात्कारको अपराधमै पहिलेभन्दा कठोर देखिएको छ । अब बलात्कार गरी हत्या गर्नेले आजीवन जेल बस्नु पर्नेछ । पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने, पीडितको उपचार तथा राहतका लागि अन्तरिम क्षतिपूूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । अभियुक्तले क्षतिपूर्ति रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, उजुरीको हदम्याद १ वर्ष हुने जस्ता व्यवस्थाले बलात्कार पीडितले कागजी न्याय पाउने मात्र नभई न्याय पाएको अनुभूतिसमेत हुने वातावरणको सिर्जना गर्नेछ । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकामाथि करणी गर्नेलाई सबैभन्दा बढी अर्थात् १६ देखि २० वर्षसम्म, १० देखि १४ सम्मका बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई १४ देखि १६ वर्षसम्म कैद तथा १४ देखि १६ वर्षसम्मका किशोरीमाथि बलात्कार गर्नेलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेकामाथि बलात्कार गर्नेलाई थप ३ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । आफूलाई एड्स भएको अवस्थामा बलात्कार गरी रोग सारे थप १० वर्ष तथा सामूहिक बलात्कारको कसुरमा थप ५ वर्ष सजायको प्रावधान छ । यसबाट पीडकलाई अपराधकर्ममा निरुत्साहित गर्ने र छोरीचेलीमाथिको जोखिम कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर भएको कसुरदारलाई भएको सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन, न्यूनीकरण तथा कैद निलम्बन गर्न नसकिने प्रावधानले बलात्कार सर्वाधिक दण्डनीय अपराध हो भन्ने किटान गरेको छ । यसले अपराधी मनोवृत्ति भएकाहरूको मनोबल गिराउनुका साथै बीचमै जेलमुक्त भई पुन: अर्को अपराध गर्ने कार्यलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अपराध कानुनमा गरिने दण्डात्मक व्यवस्थाका यी उच्चतम रूप हुन् । कानुनको पारदर्शी, सबल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन विना पीडितले न्याय पाउन सम्भव छैन । अबोध बालिका, छोरीचेलीमाथि बलात्कारको बर्बरता मृत्युदण्डको अभावमा मात्रै बढेको अवश्य होइन । पीडितको सुरक्षा, संरक्षण तथा पुन:स्थापनाको अभाव हुनु, पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति गर्ने सरल तथा पहुँचयोग्य न्यायिक संयन्त्र र कानुनी संयन्त्रको अभाव हुनु यसका कारण हुन सक्छन् । यस्तै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको असक्षमता, सामाजिक सचेतनाको कमी, लैंगिक विभेद, गरिबी तथा अशिक्षाका कारण सिर्जित बाध्यात्मक परिस्थिति पनि यसमा दोषी छन् । यो मामिलामा राज्य सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका साथै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
हरेक अभिभावक तथा परिवारले छोरीचेलीको संरक्षण, शिक्षादीक्षा र सबलीकरणमा पर्याप्त चासो र लगानी गर्नु आवश्यक छ । समाजले बलात्कारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा अधिकारकर्मीले पीडितको सुरक्षा तथा न्यायका लागि भएका संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्थाबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने तथा जनचेतना जगाउने गर्नुपर्छ । दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन राज्यलाई सहयोग गर्ने दायित्व हरेक नागरिकको हुन्छ ।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:१३